ဤဖြစ်ရပ်မှန် အဖြစ်အပျက်ကလေးကို အင်တာနက်ထဲတွင် အမှတ်မထင်ဖတ်လိုက်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မိပါတယ်။ စပင်ဆာကို စိတ်ထဲမှာ တိတ်တဆိတ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမိသလို၊ သူကယ်တင်ခဲ့တဲ့ လူသား (၁၇) ယောက်ကိုလည်း အားမလိုအားမရဖြစ်မိပါတယ်။ သူတို့ကို ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ လူဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုဒါ မသိလို့များလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူ့တာဝန် (ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း) သူထမ်းဆောင်ဒါဘဲ၊ အထွေအထူး ကျေးဇူးတင်စကားပြောဖို့ မလိုဘူး လို့များယူဆကြဒါလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်သူမှမသိလိုက်ပေမည့် ကျေးဇူးတင်တုံ့ပြန် တဲ့လူ တစ်ယောက်တလေတော့ ရှိမလား ဆိုပြီး “လား” ပေါင်းမြောက်များစွာ စိတ်ကူးထဲ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ကအဖြစ်အပျက်ဆိုတော့ တိကျတဲ့ အဖြေမှန်ပြန်ရဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သည်အဖြစ်အပျက်ကလေးအပေါ်မူတည်ပြီး ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာလေး တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့တတွေ အဲဒီ (၁၇) ယောက်ကဲ့သို့ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်မပြောတဲ့လူများ မဖြစ်ဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဘဲ။ တဆက်ထဲမှာဘဲ အဲဒီသေခြင်းထက် ဆိုးဝါးတဲ့ ထာဝရသေခြင်းဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လောကလူသားအားလုံးရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် အသက်စတေးခဲ့တဲ့ သခင်ယေရှု ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကိုလည်းသတိရစေပါတယ်။
မြေကြီးသားအပေါင်းတို့၊ ထာဝရ့ဘုရားအား ကြွေးကြော်ကြလော့။ ထာဝရဘုရား၏ အမှုတော်ကို ဝမ်းမြောက်စွာ ဆောင်ရွက်ကြလော့။ ရွှင်လန်းစွာ သီချင်းဆိုလျက်၊ အထံတော်သို့ ဝင်ကြလော့။ ထာဝရဘုရားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ် တော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြလော့။ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍၊ ငါတို့၏ အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါတို့သည်လည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ လူဖြစ်ကြ၏။ အထံတော်၌ ကျက်စားသောသိုးစုလည်း ဖြစ်ကြ၏။ ကျေးဇူးတော်ကို ကြီးမားပါသည်ဟု ဝန်ခံလျက်၊ တံခါးတော်တို့ကို၎င်း၊ ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းလျက် တန်တိုင်းတော်တို့ကို၎င်း ဝင်ကြလော့။ ကျေးဇူးတော်ကို ချီ;မွမ်း၍ နာမတော်ကို ကောင်းကြီးပေးကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူ၏။ ကရုဏာတော်သည် အစဉ်အမြဲ ရှိ၍၊ သစ္စာတော်သည် ကာလအဆက်ဆက် တည်လေသတည်း။ (ဆာလံ ၁၀၀း၁-၅) Happy Thanksgiving to you all.
This entry was posted on November 24, 2010 by thawngno in Article Salvation, Articles Christian Life, Christianity Related Articles, Thawngno and tagged salvation, Thawngno.	Shortlink